Anyị nwalere vidiyo Telegram ọhụrụ na nchịkọta akụkọ foto | Gam akporosis
telegram dị nnọọ ụbọchị ole na ole gara aga mara ọkwa ọhụrụ melite maka Ngwa gam akporo na-akpali mmasị ozi ọma. Otu n’ime ha na nke anyị ga-ekwu maka ya taa bụ ihe nlere vidiyo na foto gi, ebe ọ bụ na ọ dị ike ma anyị nwere ike ịme mgbanwe na vidiyo na onyonyo tupu iziga ya na kọntaktị ọ bụla na ndepụta ahụ.
Chegodi inwe ike imalite ogo ma ọ bụ nye ya mmetụ dị iche na akwụkwọ mmado eserese, na mgbakwunye na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ nke etinyere. Naanị obere aka ole na ole ka ị ga - erite uru nke onye editọ a nke ga - eme ka ọ bụrụ ngwa ọrụ dị iche iche ma ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume.
El video nchịkọta akụkọ agbakwunye na nchịkọta akụkọ foto malitere na 2015, nchịkọta akụkọ na-abịa na mmelite kachasị ọhụrụ na ịmalite ya, họrọ naanị otu clip, họrọ ntọala ahụ tupu izipu vidiyo na kọntaktị ahụ. Cheta na ọ ga-arụ ọrụ naanị na Telegram 6.2 nke gam akporo.
1 Ile anya na oru ya
2 Nhazi ederede
3 Ntọala nchịkọta akụkọ vidiyo ndị ọzọ
3.2 Mkpakọ vidiyo
Ile anya na oru ya
Ozugbo anyị nwere obere vidiyo nke mepere Telegram nchịkọta akụkọ anyị ga-ahụ ihuenyo ụlọ na ntanetịchafụfụ site na okpokolo agba. Otu n'ime ohere ndị mbụ ị mepere bụ inwe ike mbugharị ma ọ bụ tinye obere onyonyo maka edezi vidiyo ị họọrọ maka usoro a.
Ahịhịa: Ọ bụrụ na ịhọrọ ahịhịa ọ ga-enye gị ohere ịse ihe ọ bụla n'ụzọ zuru ezu, anyị nwere palette agba dị ezigbo mkpa ma ọ bụrụ na ị dị mma ịse, ide ihe ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ị nwere ike inweta ọtụtụ ihe na nke a. E wezụga nke ahụ, anyị nwere ike ịhọrọ ụdị nke ọnya ahụ ntakịrị ma nwee ụdị dị mma site na ịnwe ọtụtụ nhọrọ ederede.
Akwụkwọ mmado: Ọ bụ otu n'ime ike nke onye nchịkọta akụkọ vidiyo a, ebe ọ bụ na enwere nnukwu nhọrọ nke akwụkwọ mmado na Telegram, yabụ nhọrọ ahụ na-etowanye karịa ka anyị gbakwunyere na ntọala anyị. Enwere ngwugwu mmado na animated, ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ya n'ọrụ, ị nyere onye ịchọrọ ịhọrọ ma ọ ga - enye gị ohere ịkwaga ya na akụkụ ọ bụla nke ihuenyo ahụ, gbanwee ya site n'aka ekpe gaa n'aka nri.
Ọzọ nhọrọ nke Telegram video nchịkọta akụkọ Ọ ga-enye anyị ohere itinye ederede na etu anyị chọrọ, ebe ị nwere ike buo ibu ma ọ bụ belata ederede a. Ndabere nke ederede nwere ike ịbụ agba ịchọrọ, ọzọ na palette agba ị nwere ike itinye ụda na igbe ahụ ma gosipụta ya na ederede na ọcha, oji ma ọ bụ agba ị kpebiri ịhọrọ na mbụ.
Ngosiputa nke ihe nlere di nma ma oburu na itinye oru ndi okacha mara, ma oburu n’okwu a good di nma na ngalaba a, otutu otutu ka inweta otutu edezi. N'ime ule anyị, ị ga - ahụ gifs ndị na - emegharị ahụ, otu n'ime ha ka edozi ya na ndị ọzọ abụọ na - agagharị na igbe ederede.
Ntọala nchịkọta akụkọ vidiyo ndị ọzọ
Ọ bụrụ na anyị anọgide na nhọrọ nke ahịhịa na obere vidiyo anyị nwere ike ịkwalite ya, kpughee ikpughe na iche, ụfọdụ nhọrọ ka mma ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere isi nchịkọta akụkọ vidiyo nke Bgram (onye ahịa ọzọ dị ma e wezụga onye ọrụ gọọmentị). Ọ ga-adabere na ọkwa ndị ị họọrọ iji melite ma ọ bụ ka njọ ya dabere na ị na-ebelata ma ọ bụ saturate ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka vidiyo ahụ zuo oke na mma, debe ntọala ahụ n'etiti ihe dị ka, ọ bụ ezie na ịnwere ike inye ntụgharị ọhụrụ na foto ahụ ma mee otu oyiri iji jiri profaịlụ na Telegram, Facebook, Twitter ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta ọzọ dị ka Instagram.
Iji akụkụ a n'ime ntọala nchịkọta akụkọ ọ ga - enyere gị aka itinye ngbanwe site na ahịrị ole na ole, site na ọkụ ruo n'ọchịchịrị naanị site na imetụ akara. Mmetụta ya ezuru ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enweghi ngwụcha, yabụ dabere na nka gị ị ga-enweta ọtụtụ ihe na nhọrọ a.
Ogo nke vidiyo ahụ n'oge ịchekwa ya iji zipu ya sitere na ala dịkarịsịrị mma, yana mkpakọ nke ga-adị iche site na obere kilobytes na megabytes ole na ole. Nhọrọ kachasị mma na nke a ga-ahọrọ isi nke atọ ma ọ bụ nke anọ, nke nwere ezigbo mma.
Ọzọkwa dabere na oge ọ ga-ebu ihe ma ọ bụ obere, ebe ọ bụrụ na ị nwere vidiyo nke ihe karịrị 10 nkeji ọ nwere ike ịdị iche na obere megabytes karịa karịa 10 megabytes, ebe a ọ ga-adabere na vidiyo ị họrọ.
Ozugbo anyị nwara ya, anyị ga-enwe afọ ojuju na ya a video nchịkọta akụkọ emejuputa na mbipute 6.2 na ihe anyị ga-eji ma ọ bụrụ na anyị etinye obere mgbanwe ole na ole na vidio anyị. Telegram na-etinye batrị ma melite ihe bụ ngwa izipu ozi nwere ike ikpuchi nke ọ bụla n'ime ọtụtụ ebe eji taa.
Cheta na inwale ya na ị ga-eji ukara Telegram ngwa na na ị nwere ike ibudata ya si ebe a n'okpuru bụrụ na ị na-adịghị ya arụnyere na gị gam akporo ngwaọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Anyị nwalere vidiyo Telegram ọhụrụ na nchịkọta akụkọ foto
Ihe nkiri Google Play karịrị ijeri nbudata 5